Madasha uu shirweynaha qaran ee Soomaalidu ka socdo ee Mbagathi waxaa si xoog leh uga socda ololaha ay musharixiinta madaxweynanimadu ku doonayaan inay ku kasbadaan taageerada ergooyinka iyo dadweeynaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool. Musharixiinta ilaa iyo hadda isu taagey inay u tartamaan jagada Madaxweynanimada waxaa ka mid ah C/qaadir Suufi oo Muruudi Golf ku magac dheer. Muriidi waa nin dheer oo bidaar leh oo si degan u hadla. Wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii wax ku soo baratay Jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee Gahayr, qaybteeda sharciyada. Wuxuuna ka soo jeedaa dadka Banadiriga loo yaqaan oo xadaarad iyo wadaninimo loo og yahay.
Barnaamijkiisa wax qabad oo aan soo akhriyey ayuu Muriidi ku qeexay sida ay uga go'an tahay inuu danta gaar ahaaneed ka hor mariyo danta guud haddii uu doorashada ku guulaysto. wuxuu kaloo barnaamijkiisa ku sheegay inuu wax ka qaban doono arrimahan soo socda:
Xuquuqda dhawrista sharafta iyo karaamada bani'aadamka, horumarinta caafimaadka, soo celinta nabad gelyada iyo xasiloonida dalka, xanaanaynta agoonta, curyaaminta iyo dadka duqoobey, horumarinta xiriirada caalamiga ah iwm.
C/qaadir Sufi mar aan la sheekaystay oo aan waydiiyey rejada uu ka qabo hanashada guusha doorashada wuxuu ii sheegay inuusan isagu uba baahnayn inuu olole iyo abaabul badan galo. Taasna wuxuu sabab uga dhigay inay dadka Soomaaliyeed ku soo urureen markii uu musharxnimadiisa shaaciyey. isagoo arrintaa ka hadlayana wauxuu yidhi: "anigu olole iyo abaabul badan la iigama baahna waayo markaan is sharaxyba dadkii oo dhan baa i taageeray oo madaxweyna-nimadayda u heellan, maadama aan ka soo jeedo qoys wadaniyiin ah oo xoriyaddii u soo dagaalamay". Muriidi Golf waxa uu la dhashay Cadde Suufi oo an nin Soomaaliyeed oo sanadkii hore u tartamay xubin baarlamaanka dalka Holand ah. kaas oo kaalintii uu u tartamayey booska 2aad ka galay.
Mr. Suufi wuxuu ku rejo weyn yahay inuu isagu ku guulaysanayo tartanka dhowaan ka dhici doona dalka Kenya ee la doonayo in lagu soo afjaro dhibaatihii wadanka Soomaaliya 13ka sano ka oognaa. wuxuu qabaa xitaa haddii uusan ku guulaysan inuu ugu yaraan sigi doono ninka isagu guulaha Mbagathi urursada.
..... doorta qofka ay siyaasaddiisu dhex-dhexaadka tahay, oo haddana ah siyaasi dhalinyaro ah....
Hal-hayska doorashada Muriidi Golf
Xaashiyaha barnaamijka wax qabadkiisa waxaa hal-hays u ah: doorta qofka ay siyaasaddiisu dhex-dhexaadka tahay, oo haddana ah siyaasi dhalinyaro ah. C/qaadir Suufi oo ah nin dhalinyaro ah oo ka mid ah musharixiinta 40'ka kor u dhaaftay ee tartanka madaxwenanimo isu soo taagtay waa nin lagu yaqaan asluub wanaag iyo deganaan aad u saraysa.
Barnaamijkiisa waxa kor iyo hoos ku aslan sawiro qurux badan oo ay ka mid yihiin khariidada Soomaaliya oo ay shimbir caleen afka ku sidda kor heehaabayso, sawir Muqdisho oo nabad ah lala helay, calaamadda jamhuuriyadda iwm. la arki doonee doorka uu Muriidi Golf ka ciyaaro tartanka kulaylka badan assii uu isagu sahlay ee laga filayo siyaasiyiinta Soomaalida ee haddaba gorodda iskula jira.